OTU ESI ENYERE BITLOCKER N'ENWEGHỊ TPM - WINDOWS - 2019
Otu esi enyere BitLocker n'enweghị TPM
BitLocker bụ ọrụ encryption na-arụ ọrụ n'ime Windows 7, 8 na Windows 10, na-amalite site na nsụgharị Ndị ọrụ, nke na-enye gị ohere iji data ezoro ezo na HDD na SSD, yana na draịva ndị nwere ike iwepụ.
Otú ọ dị, mgbe a gbanyere ikikere BitLocker maka nkewa nke diski diski, ọtụtụ ndị ọrụ na-ezute ozi na "Ngwaọrụ a enweghị ike iji usoro modul tụkwasịrị obi (TPM). Onye nchịkwa aghaghị ịtọ ka Ikike na-eji BitLocker enweghị nhọrọ TPM dakọtara." Otu esi eme nke a na encrypt usoro kuki site na iji BitLocker na-enweghị TPM ga-atụle na ntụziaka dị mkpirikpi. Hụkwa: Otu esi etinye paswọọdụ na eriri flash USB site na iji BitLocker.
Ntughari Ntughari: TPM - ntinye ihe ntinye ederede cryptographic nke eji eme ihe ezoro ezo, enwere ike ime n'ime ya ma obu jikota ya.
Rịba ama: ikpe ikpe akụkọ kachasị ọhụrụ, malite na njedebe nke afọ 2016, kọmputa niile e mepụtara ọhụrụ na Windows 10 ga-enwe TPM. Ọ bụrụ na kọmputa maọbụ laptọọpụ gị mere kpọmkwem mgbe ụbọchị a gasịrị, ma ịhụ ozi a kapịrị ọnụ, nke a nwere ike ịpụta na n'ihi ihe ụfọdụ TPM nwere nkwarụ na BIOS ma ọ bụ na esiteghị na Windows (pịa igodo Win + R ma tinye tpm.msc iji chịkwaa modul ahụ ).
Ịhapụ BitLocker iji jiri TPM dakọtara na Windows 10, 8 na Windows 7
Iji nwee ike izochi usoro ngwa ngwa site na iji BitLocker na-enweghị TPM, ọ ga-ezuru ịgbanwe otu otu oke na Windows Local Group Policy Editor.
Pịa igodo Win + R wee banye gpedit.msc ịmepụta onye nchịkọta iwu obodo ahụ.
Mepee ngalaba (nchekwa na ekpe): Nhazi Kọmputa - Ntọala nchịkwa - Ihe ndị dị na Windows - Ntọala iwu a na - enye gị ohere ịhọrọ BitLocker Drive Encryption - Sistem arụmọrụ.
Na pane nri, pịa okpukpu abụọ "Usoro iwu a na-enye gị ohere ịhazi ihe a chọrọ maka ịnweta nkwenye na mbido.
Na windo nke mepee, lelee "Kwadoro" ma hụkwa na igbe "Ekwe ka BitLocker na-enweghị usoro TPM dakọtara" na-enyocha (lee nseta ihuenyo).
Tinye mgbanwe gị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike iji nkesa disk na-enweghị ozi ezighị ezi: họrọ nanị diski disk na onye na-eme nchọpụta, pịa aka na ya wee họrọ ihe omume menu ihe dị n'ime BitLocker, kwadoro ntuziaka nke ọkachamara Encryption. Enwere ike ime nke a na "Ogwe njikwa" - "BitLocker Drive Encryption".
Ị nwere ike ma ọ bụ debe paswọọdụ iji nweta disk ahụ ezoro ezo, ma ọ bụ mepụta ngwaọrụ USB (USB flash drive) nke a ga-eji dị ka igodo.
Rịba ama: Mgbe nkesa disk dị na Windows 10 na 8, a ga-akpali gị ịchekwa data decryption, gụnyere na akaụntụ Microsoft gị. Ọ bụrụ na ị kwadoro ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ana m akwado ya - na ahụmahụ m site na iji BitLocker, koodu mgbake maka ịnweta diski site na akaụntụ ahụ ma ọ bụrụ na nsogbu nwere ike ịbụ naanị ụzọ ị gaghị efu data gị.